Kenya Safari Travel Guide: Ahoana no fomba hanomanana drafitra masai Mara Safari tsara tarehy avy any India
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Kenya Safari Travel Guide: Ahoana no fomba hanomanana drafitra masai Mara Safari tsara tarehy avy any India
Zavatra tsy tokony hotadidina rehefa manomana safari Kenya fa misy ny hetsika tsara indrindra tokony hodinihina, ny fitsidihana fitsidihana mega mega, ary ny fitsangatsanganana any Maasai Mara avy any India tsy misy olana.
A Kenya safari tsy vakansy fotsiny. Odyssey io. Dia nankany amin'ny tsy fantatra. Ary izany no tena mahavariana azy!
Ao afovoan'i Maasai Mara, rehefa mitsambikina eny ambony balaonina eny an-kalamanjana ianao amin'ny marainan'ny andro, dia tsy afaka ny hahatsapa ny rivotra afrikanina marihitra ianao, bevohoka amin'ny tantara an-tsehatra amin'ny Savannah AFrican izay efa hiseho. Miadana moramora, miakatra ny balaonina, manidina eo ambonin'ny Mara Maasai midadasika.
Manerana ny faritra feno ahitra eny an-tsaha dia toa manala tsikelikely ny sisa amin'ny haizina farany hamihina ny hafanan'ny fiposahan'ny masoandro mahatalanjona.
Tsikelikely, ny lanitra miparitaka dia manome loko volomparasy volamena rehefa miposaka amin'ny tany ny tara-masoandro mamitaka ary manaitra ny fanjakan'ny biby ho velona. Fanambarana izany.
Tsikaritrareo fa misy tilikambo zirafira eo akaiky eo, mitsilopilopy manodidina ny nibbling ny ravina hazo sasany;
Misy ihany koa Dik-Diks mailamailaka eraky ny lalao, feno angovo maraina. Mandritra ny segondra segondra dia manontany tena ianao hoe inona ireo avo-Dik-Dik ireo.
Tahaka ny valin-teniny, mitroka am-bava ny rhino mitrongy rehefa mandroso izy, niondrika ny lohany, tsy voafitaky ny fizaran-tany maraina.
Tsy fantatry ny ankamaroan'ireto mpilalao ireto, reharehan'ny liom-bavy tsy mangina tsy lavitra, maso miambina amin'ny Dik-Diks, tsy isalasalana fa mikasa ny sakafo maraina ho an'ny ankohonany izy ireo.
Kenya ny fitsangatsanganana mihaja mankany Maasai Mara mahatsapa ho toy ny andiam-piainana tena izy amin'ilay sarimihetsika 'Lion King', tapakila vanim-potoana premium mankao amin'ny teatra bibidia miaraka amin'ny seza pavilion, ho anao irery ihany.
Ao amin'ity torolàlana ity dia manam-pahaizana avy MasaiMarasafari.in zarao ny toro-hevitra momba ny drafitra safari Maasai Mara tsara tarehy avy any India ary araraoty tsara ny zava-niainanao.
Mikasa ny Safari Luxury Masai Mara avy any India.
Ny fandraisana fanapahan-kevitra no lafiny tena ilaina amin'ny fandrindrana fahombiazana fitsangatsanganana mihaja mankany Masai Mara. Ny tiako holazaina dia hoe, iza no masoivohon'ny dia alehanao boky ny safarianao miaraka? Afaka andro firy any Masai Mara ianao? Aiza no hipetrahanao ary ohatrinona no vidiny aminao? Ireto manaraka ireto dia ireo faritra manakiana izay mila dinihinao.
Misafidy Agent Travel / Tour.
Eo amin'ny Kenyan safari, mpiasan'ny fizahantany manana andraikitra lehibe.
Ireto ry zalahy ireto izay manampy anao amin'ny drafitra ny làlan-kaleha, ny fandaharam-potoana fitsidihana, ny fandaminana ny trano hipetrahanao, ny sidina anatiny, ny fanomezana torolàlana momba ny fizahan-tany ary ny fikarakarana ny zavatra hafa rehetra ilainao amin'ny safari fahombiazana any Kenya.
Orinasa fizahan-tany azo antoka, noho izany, foto-tsakafon'ny iray Maasai Mara safari.
Fa avy amin'ny ranomasina misy mpizahatany, ahoana no ahafantaranao hoe iza amin'izy ireo no mety aminao?
Voalohany, ireo masoivohon'ny fizahantany matihanina dia manana fahazoan-dàlana ara-dalàna, voasoratra anarana ary manana birao sy tranokala ofisialy.
Fomba iray lehibe hahafantarana raha afaka manatanteraka ny toky nomeny ny orinasa mpizahatany iray dia ny fijerena ireo fanadihadian'ny mpanjifa taloha sy fijoroana vavolombelona.
Ny isa navoakan'ny mpampiasa tsara amin'ny sehatra nomerika mihoatra ny iray dia mampiseho akanjo iray izay mahay tsara amin'ny varotra ataon'izy ireo, midika izany fa eo am-pelatanana ny safarianao.
Jereo ihany koa ireo orinasa mpizahatany manana fiara voakarakara tsara. Ny fitaterana azo itokisana dia mety hidika hoe ny fahasamihafana misy eo amin'ny safari bush izay faly ary tafahitsoka any an'ala.
Sary 3Ajkenyasafaris iray amin'ireo mpandraharaha mpizahatany azo antoka ao Kenya.
Raha ny tsara indrindra, ny Fitsidihana Maasai Mara ny orinasa nofidianao dia tokony hanana mpitari-dalana tompon-tany mahalala hoe rahoviana ary aiza no ahitana ny hetsika.
Ny torolàlana zanatany dia manamora ny fahazoana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana toy ny Maasai sy Samburu.
Ireto misy olona manaitaitra anao izay tsy isalasalana fa ho tojo anao mandritra ny a safari any Kenya.
Ireo masoivohon'ny fizahan-tany matihanina dia tena ilaina tokoa rehefa mikasa ny làlan-kaleha. Fomba iray fanampiny handroahana ireo mpiasa sandoka dia ny fanaovana fampitahana ny làlan-kaleha sy ny vidiny.
Ny vidiny ambany dia ambany dia sainam-pirenena mena ary manondro fa mety mampanantena mihoatra ny fahaizany mandefa izy ireo.
Soso-kevitra mafana: Ireo masoivohon'ny fizahan-tany tsara indrindra dia manome anao fitsangatsanganana mihaja any Maasai Mara. Eto, tonga any ampifanaraho amin'ny zotra safarianao ny Safari ny teti-bolanao ary safidinao.
Hetsika tiana kokoa.
Aza matahotra ny hitarika ny fikarohana ataonao any amin'ny toeran-kaleha sy ny hetsika tianao hampidirina mandritra izany safari mankany amin'ny Maasai Mara.
Tsy misy fotoana mangirana mihitsy mandritra izany mandeha any Maasai Mara. Izany dia bebe kokoa raha eo amin'ny a ianao fitsangatsanganana mihaja mankany Maasai Mara, satria manome anao fidirana tsy voafetra amin'ny zavatra rehetra atolotry ny Mara.
Ny hetsika lehibe asongadinay amin'ity fanoratana ity dia tsy hoe mandreraka akory. Betsaka ny hetsika fanampiny azo atao, miankina amin'ny fandaharam-potoananao.
Mitaingina balaonina mafana
Iray amin'ireo fomba mahaliana indrindra hanombohana ny andronao ao amin'ny Maasai Mara ny fandehanana mitaingina balaonina rivotra mafana.
Toy ny rivotra malefaka, miondrana amin'ny savannah Mara ary ankafizo ny fijerena an'habakabaka metatra vitsivitsy eo anelanelanao sy ny bibidia eo amin'ny tany. Eto ianao dia afaka mahita azy rehetra.
Sary faha-5 balaonina rivotra sy andiam-biby avy any Zebras ao Mara
Tadidio fa ny Mara no fonenan'ny Big Five (Lion, Buffalo, Elephant, Rhino, ary Leopard) ary manana mpiremby mpiremby indrindra eto an-tany.
Nandritra ny fifindra-monina Wildebeest fanao isan-taona, nanitsakitsaka ny reniranon'i Mara ny fijoroana vavolombelona taonan'ny Wildebeest, satria niandry ny Liona, Cheetah, Crocodiles, ary ny mpiremby hafa.
Mandritra ny andro dia azonao atao ny miditra amina fampidirana am-pilaminana kokoa ny bibidia any Kenya amin'ny alàlan'ny kapila lalao sy safari mandeha.
Ireo dia mamela anao hankafy ny safarianao ao amin'ny Maasai Mara amin'ny fomba hafa, satria manome fihaonana akaiky kokoa amin'ireo biby izy ireo.
Ianao koa dia mahita karazana biby kely kokoa eo akaiky eo, toy ny Fox, Caracals, Mongoose, Warthogs, Monkeys, ary Baboons.
Ny fitempon'ny fon'ny Mara dia azo tsapain-tanana amin'ny bibidia sy ny vahoaka Mara. Ny Maasai dia vazimba teratany Mara ary manana lova manankarena toy ny biby ihany.
Amin'ny fitsidihana mihaja any Maasai Mara, ny fitsidihana tanàna Maasai dia tsy maintsy atao. Ny fampidirana azy io amin'ny dianao dia manome anao fotoana tsy fahita firy hihaona amin'ireo olona maro loko ireo.
Soso-kevitra mafana: Misafidiana toeram-ponenana eo afovoan'i Maasai Mara, izay tsara kokoa akaikin'ny loharanom-biby (ny reniranon'i Talek sy Mara). Izany dia hahafahanao mijery bibidia be dia be na dia ao amin'ny tranon'ny tranolay aza.
Sary 6Elefanta manala ny hetahetany
Famandrihana ny Maasai Mara Safari anao.
Ankehitriny rehefa hitanao ny maso mpizahatany sy ny hetsika tianao, fotoana izao hamandrihana ny dianao.
Mifandraisa amin'ny mpandraharaha fizahan-tany ary apetraho ny fanontaniana momba ny fonosana fitsangatsanganana ataon'izy ireo. Ity fampahalalana ity dia hanaporofo fa sarobidy amin'ny fanapahan-kevitrao.
Ohatra, ohatrinona ny salan'isa vidin'izy ireo amin'ny safari Maasai Mara mahazatra? Samy hafa ve ny vidiny rehefa fitsangatsanganana mahafinaritra any Maasai Mara izany?
Ahoana ny fotoana mety hitsidihana azy? Inona avy ireo zavatra tokony antenainao ho hita amin'ny fotoana samihafa amin'ny taona?
Ary koa, ny ankamaroan'ny orinasam-pizahantany dia manana zavatra napetraka mialoha izay tafiditra na tsy tafiditra amin'ny diany.
Aza adino ny manontany izay tafiditra ao na tsy tafiditra amin'ny dia manokana.
Izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitra na fandaniana tsy ilaina amin'ny zavatra izay voasarona amin'ny fomba hafa.
Mandritra io fifanakalozana io dia zava-dehibe ihany koa ireo karazana dia natolotra. Ohatra, manao safariam-pianakaviana ve izy ireo? Business safaris? Fitsangatsanganana irery sns.
Raha vantany vao nanapa-kevitra ny amin'ny safari Maasai Mara idealy ianao dia mangataha kopia amin'ny zotram-piaramanidina sy ny teny nindramina nataon'ny orinasa.
Ny ankamaroan'ny orinasa malaza toa ny Ajkenyasafaris.com dia hanisa am-pifaliana ireo ho anao.
Soso-kevitra mafana: Rehefa mamandrika ny dianao mankany Maasai Mara ianao dia azonao atao ny manambatra karazana safaris roa ao anatin'ny fitsidihana iray. Safari safira dia mety ho avo roa heny toy ny safari tantaram-pitiavana raha vantany vao vita ny fivorian'ny orinasa! Ataovy avo roa heny ny fifaliana amin'ny dia iray mandeha.
Inona no fonosana.
Miaraka amin'ny lojika rehetra karakaraina, fotoana izao hiomanana amin'ny fiaingana.
Rehefa miomana amin'ny safari efa nandrasana hatry ny ela ianao, ny fahalalana izay hajanona dia zava-dehibe toy ny fahalalana izay fonosana.
Kenya dia firenena tropikaly manana toetr'andro mafana mandritra ny taona. Mety ho tsara kokoa raha mifidy akanjo maivana ianao rehefa manangona.
Ary koa, satria handeha ho any amin'ny safari bush ianao, dia tsara kokoa ny mitady akanjo miloko mena sy maitso satria tsy dia atahorana kokoa ny biby toy izay mena mena.
Ny akanjo vita amin'ny tan dia manampy anao hifangaro amin'ny tontolo voajanahary ary tsy dia mandoa ireo biby handositra ianao.
Ny zava-dehibe hafa tokony hampidirina dia ny menaka fanosotra moka, satroka masoandro, masolavitra, kiraro fanatanjahan-tena tsara na baoty mitsangatsangana, ary palitao mafana na roa ho an'ireo takariva mangatsiaka ireo.
Soso-kevitra mafana: Ny governemanta Kenyan mitaky ny mpitsangatsangana rehetra hanana mari-pankasitrahana Yellow Fever sy ny fisotroan-dronono COVID-19. Mifandraisa amin'ny dokoteranao momba io fanamarinana tena ilaina io alohan'ny hamandrihanao ny sidina.
Loharanon'ny sary: https://pixabay.com/photos/lion-family-africa-kenya-safari-3028170/
Fepetra fitsangatsanganana hanamorana ny 5 Jolay ho an'ny ...